Hiram-panahy handravÃ na ny fanahim-pidedahana? | Hevitra MPANOHARIANA |
Hiram-panahy handravÃ na ny fanahim-pidedahana?
2020-07-07 @ 18:15 in Ankapobeny
Folo taona mahery lasa izay, nisy hira malaza teto amin'ny firenena, nentina hitarihana tolona politika. Tadidinao ve ny lohateniny? 1492: Conquest of Paradise... Tamin'izany fotoana izany, alohan'ny "famakafakana" ataon'ireo mpanora-gazety dia injany ilay hira fa henonao. Hira mampamolovivoly. Dia misy hira malagasy iray hafa koa malaza niaraka taminy, hira zafindraony entina hanesoana ankolaka ny mpitondra tamin'izany fotoana izany. Lohateniny? "Iny lalana iny". (Misy tantarany koa ny nivoahan'izy ity teny an-kianja araka ny fiheverako azy fa mbola holazaina amin'ny manaraka angamba raha misy liana). Ireo hira ireo no nanavaka ny tolon'ny fanombohan'ny taona 2009.
Ny hira (vahiny) voalohany, nalaina avy amin'ny filma mitondra ny lohateny hoe 1492, taona nahatongavan'i Columbus [Cristobal Colon] sy ny namany tao amin'ny vondro-nosy Bahamas ka ny nivantanany dia ilay nosy nomen-dry zareo anarana hoe San Salvador]. Nanomboka teo, norombahiny tokoa ny paradisan'ny olona. Norombahin-dry zareo ny tanin'ireo Natives. Io no Tontolo Vaovaon'ny Eoropeana. Nihanahazo vahana tsikelikely ny Eoropeana. Ireo tonga ireo no lohalaharana tamin'ny antsoina hoe "Conquistadores" izay nomena manokana ny lehiben'ny iraka na tafika moa.
Eto aho dia te-hanamarika kely ilay tantara, ary izaho tsy mihevitra fa misy ny kisendrasendra fa mety ho efa ao anaty programa daholo ihany izany. Ny alin'ny 11 hifoha 12 oktobra 1492 no nanitsaka ny Tontolo Vaovao ry Colomb. Daty manantantara ho azy ireo izany. Manahy dia manahy mafy aho fa manakaiky ny mety hitokanana ny Arena (Colisée), entina hankalazan'ny vahoaka ny fetim-pirenena amin'ny 14 oktobra io fotoana io. Iarahantsika mahalala fa nanokatra vanim-potoana vaovao ny nanitsahan'ny Eoropeana io kaontinanta vaovao io... ary etsy andanin'izany, tsy mihevitra aho fa miteniteny foana ny Filoham-pirenena amin'izao fotoana izao raha mamerimberina hatrany izy fa "hanoratra tantara vaovao isika". Ny hoavy ihany no hanamarina na handiso izay ahiahiko izay.
Fa raha nahatadidy ianareo, tsy nisy hira nahatohitra io hira io na dia niezaka ny nandefa hira klasika hafa aza ny tao amin'ny radio mada na ny radio fahazavana. Ataoko fa fahadisoana raha klasika eoropeana no entina hanoherana klasika eoropeana. Heveriko fa amin'ny fampiadiana angovon-kira dia izay hira avy amin'izay notafihana no tokony namaliana iny hira iray iny. Tsy haiko hoe efa tara loatra ve raha izao vao manoratra. Amin'ireo hiran'ny Natives notafihana dia maro ny azo raisina fa ny nosafidiako manokana dia ny El Condor Pasa. Inona ary no mety ho anton'izany?
Iretsy tonga avy any an-dranomasina, ny condor kosa milaza voromahery heveriko ho hita manokana ao Amerika sady mari-pamantarana amin'ny maro amin'ny Natives any. Ny Voromahery koa anefa no marika hita eo amin'ny Vavahadin'i Manjakamiadana izay vao nametrahana Arena na Colisée. Ary ny Voromahery dia afa-manidina.
Ity hira ity koa malaza manerantany, indrindra tamin'ny nitondran'i Leo Rojas azy nitety vazantany efatra. Samy hiram-panahy ireo roa lazaiko ireo, tsy mampaninona na dia efa misy mpanentana radio aza efa naka io hira faharoa io ho fanombohana sy famaranan'ny fandaharany. Sa hoe? Hamaranana dia revirevy fotsiny io fa aza atao be am-po an!